Mampivandravandra • AoRaha
Tsy mety vita ny filma! Mahazo vahana hatrany ny asan-jiolahy eto amin’ity firenena ity. Ny fanjakana ve no ela fidona sa ireo olon-dratsy mihitsy no diso malalaka sy tsara mpiaro, ka manjakazaka amin’ny fampihorohoroana ny vahoaka e? Tato ho ato isaky ny misy trangana asan-jiolahy, tsy maintsy misy hatrany ny mpitandro filaminana voatonontonona. Tsy mifidy io na polisy, na zandary, na miaramila. Misy amin’izy ireo no mampindrana na mpampanofa basy na fiara na fitaovana hafa hanaovana ilay asa ratsy, misy ihany koa no tena atidoha mikotrika tsotra izao.
Tsy resabe aloha aloha fa tena mandray andraikitra amin’ny fanagadrana azy ireny ny fanjakana saingy raha izao no mitohy, azo antoka fa ry zalahy ireo indray no hameno ny fonja atsy ho atsy. Miditra ny iray androany, dia mipoitra indray ny hafa rahampitso. Dia toy izany hatrany no iainana eto amin’ity firenena ity. Aiza no tsy mandry andriran’antsy lava ny vahoaka?
Misy ny tolo-kevitra nataon’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena,amin’ny fanaparitahana miaramila manerana ireo distrika eto Madagasikara, mba hampandry fehizay ny tany hiadanan’ny valalabemandry. Tsy ratsy tsy akory izany saingy ny manahirana, dia hiaraha-mahalala ihany ny toetran’ireny mpitandro filaminana ireny, indrindra any ambanivohitra any. Mbola maro amin’izy ireny no tsy mahalala akory izay andraikitra tokony horaisiny, ka lasa manampatra fahefana sy mamonomono olona amin’ny tsy rariny. Indraindray aza toa ry zalahy ireo mihitsy no manjary mpanjaka kely, ka mamoritra ireo mpiray tanindrazana aminy.
Fehiny, mila mailo hatrany ny mpitondra fanjakana sy ny olom- pirenena. Ekena fa ny omby indray mandry tsy indray mifoha saingy raha ny zava-misy amin’izao fotoana, ireo mpitandro filaminana natao hanirina indray no vao mainka toa mampivandravandra!
Mampivandravandra - ewa.mg dit :
[…] Mampivandravandra est apparu en premier sur […]
Fitetezam-paritry ny FFM